यस्तो ठाउँ, जहाँ रात बिताउने कोहीँपनि ज्यूँदो फर्केको छैन - Samudrapari.com
यस्तो ठाउँ, जहाँ रात बिताउने कोहीँपनि ज्यूँदो फर्केको छैन
१३८० पटक हेरिएको
काठमाडौं – भारतको राजधानी दिल्लीभन्दा ३ सय किलोमिटर टाढा राजस्थानको अलवरमा एउटा पूरानो किल्ला छ । यो किल्ला अहिले भग्नावशेषको रुपमा रहेको छ । यो खण्डहरु कुनै समयमा भने एक भव्य तथा मानिहरुले भरिएको क्षेत्र थियो । यो इलाकामा सोमेश्वर, हनुमान, कृष्ण, देवी आदीका दर्जनौँ मन्दिर रहेका छन् । भगवानै भगवानको बीचमा रहेको यो ठाउँ चाहीँ भुताहा ठाउँको नामले चर्चित छ ।
यो ठाउँमा कुनैपनि भवनका छत छैनन् । तर अनौठो के भने सबै मन्दिर चुस्त अवस्थामा छन् । यो ठाउँलाई श्राप पर्नाले भुताहा ठाउँ भनेको विश्वास छ । यस ठाउँमा महल भएको स्थानमा महिला गुरु बालुनाथ बस्थे । उनले उक्त महल बनाउने बेलामा आफ्नो ध्यान भंग गर्ने भएकाले त्यहाँ कुनै महल नबनाउन चेतावनी दिएका थिए ।
यदि आफ्नो ध्यान भंग गरेमा सारा सहर ध्वस्त हुने चेतावनी उनको थियो । तर उनको कुरालाई कसैले ध्यान दिएन र त्यहाँ भवनहरु बनाए । जसका कारण गुरुले श्राप दिए र रातारात त्यस ठाउँ विरानो बन्यो । उक्त ठाउँलाई एक तान्त्रिकले पनि श्राप दिएका कारण एकाएक ध्वस्त भएर खण्डहरमा परिणत भएको विश्वास गरिन्छ ।
उक्त तान्त्रिकले त्यस किल्लामा रहेका कुनैप्नि मानिसले पुनर्जन्म लिन नपाउन् भन्ने श्राप दिएको थियो । सोही कारण त्यस क्षेत्रमा अकालमा मृत्यु भएका मानिसहरुको आत्माले मुक्ति पाएन र पुनर्जन्म समेत नपाउँदा धेरै कैयन् मृतात्माहरु अहिले पनि भट्किरहेको विश्वास गरिन्छ । यो ठाउँमा साँझ पर्ने बित्तिकै मानिसहरु जान डराउँछन् ।
सरकारी अधिकारीले पनि त्यहाँ रातको समयमा जान निषेध गरेको छ । उक्त ठाउँमा रात बिताउने मानिस कोहीपनि ज्यूँदै नफर्किएको स्थानीयहरु बताउँछन् । फर्किएर आएका मानिसहरु पनि मानसिक रुप्मा विक्षिप्त बनेको बताइन्छ । -एजेन्सी
यस्तो पनि : खेती जोगाउन सनी लियोनको पोस्टर!
दाइजोका माग गर्ने दुलाहा युवती निस्केपछि…
ब्याग चोरी हुने पिरले चीनमा एक महिलाले गरिन् अनौठो हर्कत
यस्ता छन् , सानो ल्वाङको ठूलो फाइदा
कसरी जिते यी पुरुषले सुन्दरी प्रतियोगिता ?
विश्वकै अग्लो पुरुष र होची महिलाको भेटपछि…
भ्यालेन्टाइन सप्ताह : आज प्रपोज डे: यसरी गर्नुस प्रेमको सुरुवात
घरको छतमाथि गुड्छन् रेल र मोटर, यस्तो छ चीनको विकास
पढ्ने बेला के गर्ने के नगर्ने ?